dawada dhirta ee soo saarayaasha xoolaha, alaab -qeybiyeyaasha - dawada dhirta ee Shiinaha ee Warshadda xoolaha
Noocyada: Daawooyinka Dhirta Waxyaalaha Saameynta Ku Leh Farmashiyaha: Noocyada Xayawaanka Baakadaha: 500g ama 1000g /bac ama 500ml ama 1000ml /dhalo ama OEM. Wax -soo -saarka: 20000 dhalooyin iyo 20000 bacaha maalintii Goobta Asal ahaan: Hebei, Shiinaha (Dhul) Shahaadada: GMP ISO Port: TIANJIN Proventriculitis treatment Halabuurka: aconite, fangfeng, pinellia, diirka tangerine, poria, asarum, jujube, angelica, astragalus, licorice, sinjibiil qalalan. Tilmaamid
Daaweynta Qufaca Qaab-dhismeedka: Ephedra, Almond Qadhaadh, Gypsum, Shatiyada duban ee la dubay: waa dareere bunni madow Tilmaam: Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo qufaca iyo saxaro qallalan oo ay sababeen caabuqyada neef-mareenka, Barooriyaha ba'an iyo dabadheeraad ah 15-18days: Marka ay soo baxaan dhaawacyo necrotic-cawlan sambabbada, sheygan waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo mareenka neef -mareenka si looga hortago embolism -ka tracheal. Isticmaalka iyo qiyaasta: 500ml isku dar 200L biyo cabitaan ah 4 saacadood gudahood 3-5 maalmood oo joogto ah.
Qandhada daawaynta Halabuurka: Ephedra, Bupleurum, Gypsum, Anemarrhena, Japonica Rice, Licorice, iwm. Qandho ka dhalatay hargab iyo sababo kale oo kala duwan. Isticmaalka iyo qiyaasta: 500ml isku qas 150-250L biyo cabitaan ah 3-5 maalmood oo joogto ah.
Beerka iyo kelyaha oo wanaagsan dhaawaca beerka iyo kelyaha oo ay keento cilladda beerka dufanka leh, quudinta oo xumaata, sumowga daroogada, iwm; Badeecaddan ayaa mar keliya lagu dabaqaa broiler -ka marka ay jirto da'da 16 maalmood, taas oo si cad uga hortegi karta dhacdada dhimashada degdegga ah isla markaana yareyn karta dhimashada muddada dambe. Marxaladda dambe ee daaweynta cudurka, sheygan waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo beerka dhaawacmay ...
Daaweynta AKL Halabuurka: Codonopsis, Astragalus, Licorice, Aconite, Ginger qalalan, Cornus, Plantain, Gentian, Yinchen, Bupleurum, Gardenia, Salvia, Rhubarb, Angelica, White Peony. Aragtida Ankara waxaa markii hore loogu yeeri jiray "Jiritaanka Cagaarshowga Jirka", laakiin markii dambe waxaa loogu magac daray "Cudurka Ankara" sababtuna waa dillaac ka dhacay Ankara, Pakistan. Waxaa lagu gartaa dhimashada degdegga ah ee digaagga, dhiig -yaraan daran, cagaarshow, beerka oo weynaada, beeryarada, iyo kelyaha, dhiig -baxa iyo ne ...
Daaweynta IBD /IB /ND Halabuurka: Forsythia, honeysuckle, scutellaria, caleemaha mulberry barafoobay, yicib qadhaadh, chrysanthemum, epiphyllum, plantain, xariir, Angelica, yam, hawthorn, hees rabbaani ah, malqad, shaciir, beer -beeris, jaanis, xidid kudzu, likiro , Bupleurum, iwm. Tilmaan: Broiler-ku waa 25-32 maalmood, oo leh astaamo caafimaad sida qufac, qandho, matag, anorexia, beerka iyo kelyaha oo weynaada. Digaagga digaaga leh waxay leeyihiin astaamo sida heerka wax soo saarka ukunta oo yaraaday, qufac, qandho, ukun cad, yello ...
Noocyada: Daawooyinka Dhirta Waxyaalaha Saameynta Ku Leh Farmashiyaha: Noocyada Xayawaanka Baakadaha: 500g ama 1000g /bac ama 500ml ama 1000ml /dhalo ama OEM. Wax -soo -saarka: 20000 dhalooyin iyo 20000 bacaha maalintii Goobta Asalka: Hebei, Shiinaha (Dhul) Shahaadada: GMP ISO Dekedda: TIANJIN AIV dawaynta hargabka) halabuurka: silkorm adag, dabaqal -dhan, centipede, toad crisp, coptis, angelica, forsythia, borneol, gypsum, gardenia, houttuynia, iwm. Tilmaan: 1) Waxaa loo adeegsadaa daaweynta daawaynta ...
Daaweynta qabow Halabuurka: sinjibiil, aconite, liisaska la dubay, astragalus, khamriga bariiska, epimedium Tilmaamaha: kor u qaadista qaadashada cuntada, hagaajinta midnimada, hagaajinta iska caabbinta; yareeyo xakamaynta difaaca. Qiyaasta: 1) Digaag: 1-7 maalmood, 0.2ml/pc. Dhiirrigelinta nuugista ukunta iyo dardargelinta horumarinta xubnaha difaaca jirka. Kordhi miisaanka jirka ee 7-maalmood ah oo hagaaji isku midnimada. 2) 60 maalmood wareejinta/fidinta kooxda 0.5ml/pc. 3) 1ml/pc kadib walaaca qabow. (Daawooyinka jira qabow kadib) 4) Codsiga kadib o ...
Daaweynta Rhinitis Halabuurka: Xin Yi, cocklebur, platycodon, yicib, plantain, Angelica Tilmaan: qufac, dyspnea, cad, dheecaan sanka khafiif ah oo ka yimaada daloolka sanka marka hore, 2-3 maalmood kadib, dheecaanka sanku si tartiib tartiib ah ayuu isu beddelaa jaale huruud ah, sanka godka iyo xuubka sanka ayaa ciriiri ah oo barara, wejigana wuu bararaa. Isticmaalka iyo qiyaasta: 500-800 digaag oo qaangaar ah ayaa lagu daaweeyaa 500ml waxaana loo adeegsadaa afar saacadood gudahood fiirsashada. Taxaddarrada: 1) Badeecaddan waxaa loo isticmaalaa oo keliya daaweynta l ...